Home News Farah Macalin oo noqday lataliyaha gaarka ah ee MW Waare iyo dagaalka...
Farah Macalin oo noqday lataliyaha gaarka ah ee MW Waare iyo dagaalka Axmed Madoobe oo loo raray Hirshabeele
Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa maalmihii u danbeeyay waxa uu xiriir saaxiibtinimo hoose la furtay Siyaasiga Kenyaati ah ee Farah Macalin oo hadda ku sugan magaalada Muqadishu. Farah Macalin oo dagaal kula jira madaxda Dowlad Goboleedyadda isla markaana mushaar ka qaato xafiiska Madaxweyne Farmaajo ayaa qorshahiisu yahay in uu dar-dar galiyo dagaalka ka dhanka ah madaxda Dowlad Goboleedyadda, gaar ahaan Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe.
Madaxweyne Waare ayaa maanta qado heer sare loo soo abaabulay u sameeyay siyaasiga Farah Macalin, qadadan ayaa daba socotay wadadahal afar geesood ah oo ay yeesheen Farah Macalin, RW Xassan Khyre, MW Farmaajo iyo Farah Macalin. Sidoo kale waxaa kulankaas goobjoog ka ahaa Fahad Yasin. Kulanka ayaa looga hadlayay sidii dagaal loogu qaadi lahaa madaxda Dowlad Goboleedyadda, qorshahaas oo ay qayb ka noqon karto in dagaal sokeeye laga dhex abuuro degaano hadda nabad ah.
Waxaa wax lala yaabo ah in Madaxwyen Waare uu durbadiiba bilaabay in uu dagaal siyaasadeed ku qaado Ururka Iskaashiga Dowlad Goboleedyadda oo uu isagu ka midnyahay hadana uu ka yahay Gudoomiye ku xigeen. Waxaan shaki ku jirin in Farax Macalin oo lagu yaqaan iibinta siyaasada been abuurka ah uu lumin doono Madaxweyne Waare dhibaato hor lehna uu dhex galin doono. Sidoo kale waxaa nasiib xumo ah in dagaal ka dhan ah MW Axmad Madoobe la doonayo in laga soo abaabulo deegaanka Hiirshabeele.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo u magacaabayo shaqsi ay isku heyb yihiin Xoghaya Joogtada ee Wasaaradda Batroolka
Next articleRW Kheyre iyo Xildhibanada Beesha Murusade oo raba in ay damiintaan qoyskii gubay Marxuun Axmad Dowlo
FM: Qatar’s efforts focus on establishing good relations between Somalia and...
‘Risk of locust swarms migrating to Indo-Pakistan border from Somalia’: UN...